Vazhinji vakaurayiwa uye vakakuvara muAden International Airport kurwisa muYemen
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Vazhinji vakaurayiwa uye vakakuvara muAden International Airport kurwisa muYemen
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau • Yemen Kuputsa Nhau
Sekureva kwenhau dzematunhu, vanhu vanosvika makumi maviri nevanomwe vakaurayiwa uye gumi nevaviri vakakuvara pakurwiswa kweAden International Airport muYemen.
Kuputika uye pfuti otomatiki yakaputika ndege yaYemeni itsva payakamhara paAsen International Airport. Nhepfenyuro dzemuno dzinoratidza kusagadzikana zviitiko zvakaguma.
Vanenge vanhu vashanu vakaurayiwa uye vamwezve vakawanda vakakuvara nekuputika uku. Mifananidzo kubva kuDubai-based Al-Hadath TV chiteshi chakatora chiitiko ichi sezvo chichiitika. Sezvo vanhu vaive nerunyararo vachisiya ndege nendege nendege, boka revanhu rakaungana pazasi payo. Ipapo kamwe kamwe kurira kukuru kunogona kunzwika, kuchikonzera iyo cameraman nevamwe vanhu panhandare kuti vatambure kugara netsoka dzavo.
Kana iyo kamera ikatendeuka kuruboshwe ichienda kunobva ruzha, mhirizhonga yakazara inogona kuoneka, nemapoka evanhu achitiza kuburikidza noutsi hwerima, sezviri pachena kusiiwa nekufema. Ipapo, pfuti dzega dzega dzinonzwika. Pane imwe nguva, varwi veYemeni vanopfura pfuti dzavo mudenga kutungamira vanhu kure nenzvimbo yekuputika.
Vakaona pachiitiko ichi vakati "zvakaputika kaviri panonzwika apo nhengo dzedare remakurukota dzaive dzichisiya ndege."
Nhengo dzemakurukota, kusanganisira Prime Minister Maeen Abdulmalik, havana kukuvadzwa uye vakaendeswa kumuzinda wamutungamiri weguta.
Hurumende itsva yeYemen yakapika neMugovera wadarika chete.
Nhau dzemuno dzakazivisa zvekare kumwe kuputika muYemen, panguva ino padhuze nemuzinda wamutungamiri, uko kabhineti nyowani yakatizira zvichitevera kuputika kuAden airport.
Hurumende itsva yeYemen yakaendeswa kumuzinda chaimo mushure mekuputika kuAden airport kutanga nhasi, apo vakuru ava vaisvika kuAden kubva kuRiyadh, uko nhengo dzemakurukota dzaive nemhiko mumhemberero yakatevera hurukuro dzemubatanidzwa dzakareba dzakaputswa nemaSaudis.